Scribble 🥇 Tinye na-enwe na Emulator.online
idekasi . Kwalite usoro okwu n ’asụsụ ọ bụla bụ ọrụ chọrọ nraranye. Gịnị ma ọ bụrụ na, iji nyere aka na ọrụ a siri ike, ị ga-atụkwasị obi na mkpali nke egwuregwu egwuregwu na-atọ ọchị na nke asọmpi? Ọ bụ banyere Scribble, egwuregwu America, nke e kere na 1930 ma kemgbe ahụ sụgharịrị n'asụsụ 22.
Ederede: otu esi egwu egwu site na nzọụkwụ?
Gwuo egwu backgammon online n'efu, naanị soro ntuziaka ndị a :
nzọụkwụ 1 . Mepee ihe nchọgharị ị họọrọ ma gaa na ebe nrụọrụ weebụ egwuregwu emulatara.online.
nzọụkwụ 2 . Ozugbo ị banyere websaịtị, a ga-egosipụta egwuregwu ahụ na ihuenyo ahụ. Must ga-ahọrọ aha iji malite igwu egwu. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwekwara ike ịhọrọ ihe onyonyo. Pịa " Kpọọ " ma ị nwere ike ịmalite igwu egwu, họrọ igwu egwu megide igwe ma ọ bụ kpọọ otu ma ọ bụ karịa ndị enyi egwu.
Kwụpụ 3. Ndị a bụ ụfọdụ bọtịnụ bara uru. Ị nwere ike " Tinye ma ọ bụ wepu ụda ", pịa" Play "bọtịnụ ma malite igwu egwu, ị nwere ike" kwusi "Na" Malitegharịa ekwentị "n'oge ọ bụla.
Kwụpụ 4. Iji merie egwuregwu ị ga-ike okwu na mbadamba. Leta ọ bụla nwere akara . Onye ọ bụla nwetara ọtụtụ akara na njedebe nke egwuregwu ga-emeri.
Kedu ihe bụ Scribble?
Scribble bụ egwuregwu mbadamba nke ndị egwuregwu ya (2-4) gbalịrị ịgbakwunye isi site na ịmalite okwu ejikọtara ọnụ , na-eji okwute akwụkwọ ozi na bọọdụ ekewa Obu 225 .
Ederede akụkọ ihe mere eme
Ọtụtụ mmadụ kwenyere na ndị chepụtara Scribble bụ James brunot na Helen Brunot , ma n’ezie, ọ bụghị echiche ha, kama nke ahụ onye chepụtara Scribble bụ Alfred Butts , onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ si Poughkeepsie, na Steeti New York.
Afọ bụ 1931 , dị ka ọtụtụ ndị na-enweghị ọrụ, Butts nwere oge buru ibu iji chekwaa. O kpebiri imepụta egwuregwu ọhụrụ nke na-adabere n ’ọdịmma ya na nke ọzọ na nka.
Alfred Mosher Butts, ọ gụrụ n’ihu akwụkwọ akụkọ New York Times iji gbakọọ ugboro ole ka enyere mkpụrụedemede akọwapụtara n’asụsụ Bekee (mana ọ belatara ọnọdụ nke “S” ka egwuregwu ahụ agaghị adị oke oke), na nyere onye ọ bụla uru na-adabere na ụkọ ya.
Enweghị mbadamba ọ bụla ebe ọ bụ na a haziri taịlị ahụ dịka atụmatụ nke isi okwu. Ọ nyere egwuregwu a aha Lexicon .
A nabataghị akwụkwọ ikike patent ya, ndị egwuregwu ahụ enweghịkwa mmasị, yabụ na 1938, ọ gbanwere egwuregwu ahụ site na ịtinye 15 x 15 mbadamba jiri akara di elu na a okpukpu asaa lectern (atụmatụ ndị ka dị). .
Ọ gbanwekwara aha ya Nsogbu-Crosswords , ma otu ugboro ọzọ Office Patent na ndị na-egwu egwuregwu achọghị ịma ihe ọ bụla. Mgbe ọ gụchara ole na ole, ọ laghachiri n'ọrụ ya dị ka onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ.
N’afọ 1948, James Brunot , onye nwe otu n'ime egwuregwu ole na ole, kwuru na ọ dị njikere ịnwa ịzụ ya nke ọma. Na ntughari maka nwebiisinka Brunot nwetara ikike patent .
Ekesigharịala m n'ahịa ndị ahụ a na-agbata n'ọsọ, mekwuo iwu ndị dị mfe, gbanwere aha ya idekasi , nke bụ ụghalaahịa n'otu afọ 1948 na Great Britain na 1953 .
Na-arụ ọrụ n'ụlọ, ọ rere ihe karịrị egwuregwu 2,000 na 1949. Na 1952 okwu wee pụta na ahịa malitere ịrị elu, dịka Brunot na-achọ ịtụba akwa ahụ.
Jack Strauss, onye njikwa na ụlọ ahịa Macy, kpọọrọ mgbe ọ nọ ezumike. Mgbe ọ laghachiri ọ rịọ ngalaba egwuregwu ya ka o zitere ya ụfọdụ n’ime ha, mana enweghị ngwaahịa.
Macy bidoro ịkwado mbọ nkwado ahụ, yana n'ihi na Brunot enweghị ike ịnagide ọnụ ahịa abawanye, ọ nyere ikikere imepụta ihe Selchow & Onye agha . E resịrị ndị na-abụghị United States, Canada na Australia ka JW Spears, ụlọ ọrụ Britain. Ihe mbu nke British mere nke patenti ka emere na 1954.
Achọrọ nsụgharị dị iche iche maka asụsụ dị iche iche ebe ọ bụ na ugboro ole mkpụrụ akwụkwọ ozi na ọbụlagodi leta ha nwere ike ịdị iche (dịka ọmụmaatụ, Spanish nwere mkpụrụedemede LL na CH). E reela ihe karịrị otu narị nde egwuregwu n’asụsụ iri abụọ na itoolu. James Brunot nwụrụ na 100 na Alfred Butts na 29.
Iwu ga-adabere mgbe niile n’onye gị na ya na-egwuri egwu, ọ ga-afọ obere ka etinye ya n’ọrụ n’ụzọ zuru oke.
idekasi nwere ike igwu site na onu ogugu n’etiti ndi egwuregwu abuo rue ano .
O nwere otu akụkụ anọ nwere akụkụ anọ n'akụkụ ya.
Onye obula ga-enwe akwukwo ozi asa maka gburugburu ya.
Egwuregwu ahụ na-amalite ma ọ bụrụ na iwere leta nke kacha nso A ma ọ bụ A.
Akwụkwọ ozi ọ bụla nwere ọnụ ọgụgụ nwere uru kwekọrọ na ya.
Mpempe akwụkwọ ahụ nwere akụkụ anọ nke na-eme ka uru akwụkwọ ozi ma ọ bụ okwu bara ụba, ma ọ bụrụ na leta ma ọ bụ okwu karịrị uru ahụ. Valueskpụrụ ndị a nwere ike ịbụ okpukpu abụọ ma ọ bụ okpukpu atọ.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ nwere ike iji mkpụrụ edemede asaa n’aka ya mepụta okwu na-akpaghị aka na-egosi 50 isi .
Na Scribble, ọ bụghị naanị maka iwulite okwu, usoro a bụ iji kpokọta isi okwu na ezigbo akwụkwọ ozi na ama mma.
Mgbe mbugharị mbụ, ndị egwuregwu ga-eji opekata mpe otu leta dịrịrị na bọọdụ egwuregwu.
Egwuregwu ahụ kwụsịrị mgbe mkpụrụedemede egwuregwu ahụ kwụsịrị na ndị egwuregwu niile emeela njem ikpeazụ ha. A na-ewepụta isi ihe nke ọkpụkpọ ọ bụla na-anọgide na aka ya na ngụkọta ha.
• Ọ bụrụ na e debe ihe niile Scribble i mepụtara ruo taa n’akụkụ, ọ ga-ekwe omume ịme usoro na-aga n’ihu nwere ike ịgba ụwa gburugburu ugboro asatọ.
• Ndị agha abụọ tọrọ atọ na krivas na Antarctica na 1985. Ha na-akpọ Scribble na-aga n'ihu ụbọchị 5, ruo mgbe a napụtara ha.
• Ndekọ ọnụ ọgụgụ na-ekwu na egwuregwu Scribble 30,000 na-amalite oge ọ bụla gafere.
• Asụsụ ikpeazụ nke e mepụtara Scrabbrle bụ Welsh, nke ewepụtara ya na 2006.
• E mere atụmatụ na e nwere ma ọ dịkarịa ala otu nde iberibe egwuregwu iberibe agbasasị gburugburu ụwa.
• N’afọ 1993, akwụkwọ ọkọwa okwu nke Scribble Dictionary nke North America machibidoro nkwulu na nkwulu agbụrụ niile.